Home News Cadaalad Daro Xoogan oo Ka Jirta Garsoorka Soomaaliya&Waalidiin Badan oo Lagu Dhibaateyo...
Cadaalad Daro Xoogan oo Ka Jirta Garsoorka Soomaaliya&Waalidiin Badan oo Lagu Dhibaateyo Maalin Walba
Cadaalad daro xoogan aya ka jirta gudaha soomaaliya,dhibaatoyin xoogan aya lo geyta waalidiin badan oo caruurtoda lagu dhibaateyo xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho.
Inkasto cadalad darada ay sabab u tahay garsoorka dalka oo ku takri falo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho marka ay so wajahdo dhibatoyin xalkeda laga donayo garsoor,waxa dhacda in si qaldan lo mareeyo oo lagu takri falo awoodaha dowlada oo lacago lakala siisto.
Dhacdoyinkasi oo ay jiraan aya hadana waxa ka hadlaya Wasiirka cadaalada Abuukaate Xasan Xuseen Xaaaji waxa uu sheegay in Xabsiga Dhexe ee Xamar in dhibaatooyinka ugu badan weli lagu hayo dadka aan laheyn dad ka danbeeya.
Waxa uu Wasiir Abuukaate Xasan Xuseen Xaaaji sheegay in Garsoorka aysan si siman ula macaamilin dhammaan dadka u xiran danbiyada.
Waxa uu tilmaamay in dacwada ugu badan ay kaga imaado dhanka dadka aan heysan dhaqaalaha lagu bixiyo qareenada u dooda dadkooda,
Cadaaladu waa mid muhiim u ah dadka oo waxa ay u baahan yihin in la daryeelo, Maxaabiista Soomaaliyeed waxa dhibaato ugu filan tahay waxa ku dhex heysta Xabsiyada.
Iyado dhacdoyinkasi ay jiran aya hadana waxa dalka xilila ka haya dad danbiyo kaso galay umada waxana in maanta taliyayaasha la magacabay ay ka mid yihin shasiyaad la wataal ah oo dalka danbiyo kaso galay iyado ay ugu xuntahay in xilka taliyahay NISA lo magacaabay shaqsi an waxba kala socon howlaha logu tala galay Nabad suguida oo ah hey’ad muhiimka ah dowlad nimada.